साझा पार्टीबाट अलग्गिए मुमाराम खनाल र डा. सूर्यराज आचार्य
मुमाराम खनाल र डा. सूर्यराज आचार्य साझा पार्टीबाट अलग्गिएका छन् । पार्टी निर्माण प्रक्रियाबारे सहमति जुट्न नसकेपछि प्रवक्ता डा. आचार्य र केन्द्रीय सदस्य खनाल पार्टी संगठनबाट अलग भएका हुन् । पार्टी केन्द्रीय समिति बैठिकमा आइतबार पार्टी भंग गरेर नयाँ संरचना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेसँगै उनीहरुले पार्टी छोडेका हुन् ।
नेता खनालले पार्टी पात्र भन्दा पनि सानो भएकाले बाहिर बसेरै साझाको अभियानलाई सहयोग गर्ने बताए । बैठकमा पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका सचिवालय सदस्य सूर्यराज आचार्यले पार्टी भंग गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा अर्का सचिवालय सदस्य खनालले समर्थन जनाएका थिए ।
पार्टीमा संयोजक रवीन्द्र मिश्रको कार्यशैलीप्रति चर्को मतभेद रहेको छ । अहिलेको पार्टी भंग गरेर विवेकशील, साझासँगै रमेश खरेलसहित बृहत समूहलाई समेत समेटेर नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आचार्यको थियो । उता संयोजक मिश्रले भने साझा पार्टीसँग मात्र एकता गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेपछि खनाल र आचार्यले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन् ।